အာဏာသိမျးမွနျမာစဈတပျက အငျဒိုနီးရှားသှားခဲ့တဲ့လမျးကွောငျးကို သှဖေညျသှားခဲ့ပွီ – Federal Journal
အာဏာသိမျးမွနျမာစဈတပျက အငျဒိုနီးရှားသှားခဲ့တဲ့လမျးကွောငျးကို သှဖေညျသှားခဲ့ပွီ
၁၉၉၈ နောက်ပိုင်း ဆူဟာတိုအလွန် အင်ဒိုနီးရှားနှင့် မတူသောလမ်းကို မြန်မာက ရွေးချယ်ခဲ့သည်မှာ ထင်ရှားခဲ့ပြီ။
မြန်မာစစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး ခြောက်ပတ်အကြာ မတ်လထဲတွင် အင်ဒိုနီးရှားက မြန်မာစစ်တပ်သို့ ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ရပ် ပေးပို့ခဲ့သည်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြင့်သွားနေသော နိုင်ငံတွင် တပ်များကို မည်သို့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်လာအောင် တည်ဆောက်ကြမည်နည်းဆိုသော အတွေ့အကြုံများ အင်ဒိုနီးရှားတွင် ရှိကြောင်း၊ ထိုအတွေ့အကြုံများကို ဝေမျှလိုကြောင်း အင်ဒိုနီးရှား ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ လေတပ်စစ်ဦးစီးချုပ် အဒီတီဂျာဂျန်တိုအနေနှင့် စိတ်ရင်းစေတနာကို အခြေခံကာ ကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်း မြန်မာ ဘက်က လက်မခံခဲ့ပေ။ မြန်မာစစ်တပ်သည် ဆယ်စုနှစ်အချို့အလွန်က အင်ဒိုနီးရှားလျှောက်ခဲ့ သည်လမ်းကို လေ့လာရန် အရာရှိများကို ဂျာကာတာသို့ စေလွှတ်ခဲ့ဖူးသည်။ ယခုအခါ တွင်မူ မြန်မာစစ်တပ်သည် အာဏာရှင်စနစ်မှ ဒီမိုကရေစီသို့ ကူးပြောင်းရေး သမိုင်းထဲမှ သင်ခန်းစာကို သင်ယူရန် စိတ်ကူးမရှိတော့ပေ။ ၁၉၉၈ ဆူဟာတို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်သည် နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်နေသော မိမိတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို တမင်ပင် ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ယခု မြန်မာနိုင်ငံက လိုအပ်နေသည်မှာ ထိုကဲ့သို့သော အပြောင်းအလဲဖြစ်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီတစ်ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်အာဏာသိမ်းခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အခြေမခိုင် တတ်သေးသော ဒီမိုကရေစီယိုင်လဲခဲ့ရသည်။ ဤတွင် မြန်မာစစ်တပ်၏ ရွေးချယ်မှုသည် အင်ဒိုနီးရှားလမ်းစဉ် နှင့် လုံးဝသွေဖည်သွားပေပြီ။
လောလောဆယ် မြန်မာစစ်တပ်က ထိုင်းစစ်တပ် ၏ နမူနာကို မျက်စိကျနေသည်။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ဆယ်ရက်ခန့်အကြာတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင် လှိုင်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ်ပရာယွတ်ချန်အိုချာ ထံ ဒီမိုကရေစီစနစ် တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် အကူအညီများပေးပါရန် တောင်းခံခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ တွင် စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီး ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက် ခံ ထားရသော ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကို ဖယ်ရှားခဲ့သူ ပရာ ယွတ်ထံမှ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကို တောင်းခံနေပြန် သည်။ ပရာယွတ်၏မူမှာ မိမိအာဏာစက်ကို ဖြန့်ကျက် နိုင်အောင် နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကို ပြန်တည်ယူခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုင်းရေးရာကျွမ်းကျင်သူ Paul Chambers ကမူ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ဒီမိုကရေစီ သို့မဟုတ် အမည်ခံ ဒီမိုကရေစီဟုခေါ်သည်။ ထိုပရာယွတ် ဦးဆောင်သော ထိုင်းအစိုးရသည် မြန်မာစစ်တပ်၏ အာဏာသိမ်းသော လုပ်ရပ်ကို မရှုတ်ချခဲ့ပါ။ မြန်မာပြည်တွင်းရေးသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနေခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အင်ဒိုနီးရှားကမူ ပြတ်ပြတ်သားသား ဝေဖန်ခဲ့ပြီး တပ်မတော်၏ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်သော နှိမ်နင်းမှုများကို ရှုတ်ချကာ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေး အတွက် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ လူပေါင်းတစ်ရာကျော်ကို စစ်တပ်က သတ်ပစ်ခဲ့သည့် မတ်လ ၂၇ နေ့ နေပြည် တော်တွင် ကျင်းပ သော တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနား ကို အင်ဒိုနီးရှား စစ်သံမှူးများကလည်း ထိုင်းစစ်သံမှူး များကဲ့သို့ မတက်ရောက်ခဲ့ပါ။
အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆူဟာတိုကို ၃၂ နှစ် ကြာမျှ ကျောထောင့်နောက်ခံပြုပေးခဲ့သော အင်ဒိုနီး ရှားစစ်တပ်သည် မိမိကိုလူကြိုက်နည်းလာသည့်အချိန် တွင် မိမိ၏ကျရှုံးမှုကို လက်ခံရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ တပ်မတော်သည် မိမိ၏ လက် ကိုင်တုတ် USDP ပါတီက ပြီးခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ပြည်သူတို့က မထောက်ခံသဖြင့် မဲရှုံးသည်ကို ပင် မဲလိမ်မှုများကြောင့် ရှုံးရသည်ဟု တင်းခံခဲ့သော ကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကဲ့ ဆုတ်ချိန်တန်လျှင် ပြန်ဆုတ်မည့်လမ်း မမြင်ပေ။
“မြန်မာစစ်တပ်က သူတို့ကသာလျှင် တိုင်းပြည် ကို မပြိုကွဲအောင် ကာကွယ်နိုင်မည့်သူတွေ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကိုင်စွဲထားတုန်းပဲ”ဟု ဆူဟာတို ပြုတ်အကျတွင် စစ်တပ်အတွက် အရေးကြီးသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် တာဝန်ယူ ခဲ့ရသူ အငြိမ်းစားဗိုလ်မှူးချုပ် အောဂက်စ် ဝီဂျိုဂျိုက ပြောကြားသည်။
“အခု မြန်မာစစ်တပ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံက ၁၉၈၀ ကျော်ကာလတွေက ပုံစံမျိုးဗျ”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ ၁၉၉၆-၁၉၉၈ အာရှငွေကြေးအကျပ်အတည်းကြောင့် ပြဿနာများ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာပြီးနောက် လူရာချီ သေဆုံးခဲ့ရသော အြွုံကမှုများအပြီး ဆူဟာတိုပြုတ် ကျခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်မှ မြန်မာစစ်တပ်သည် တရားမရ နိုင်ဘဲ ရှိသည်။
အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ရဲ့ ဆူဟာတိုအလွန် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးတွေမှာ မြန်မာကယူမယ်ဆိုရင် ရကောင်း တဲ့ အသုံးတည့်နိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ အများကြီးရှိ တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေကို ယူမယ့်အစား မြန်မာ စစ်တပ်က ၁၉၉၈ မတိုင်ခင်က အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ် မော်ဒယ်ကိုပဲ အားကျနေတာဟု စင်ကာပူ The S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) မှ အင်ဒိုနီးရှား အစီအစဉ် ညှိနှိုင်း ရေးမှုး Leonard Sebastian က ပြောကြားသည်။
သမိုင်းကြောင်း ဖြတ်သန်းမှုအရ အင်ဒိုနီးရှား စစ်တပ်နှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့ တူညီသော အချက်များ ရှိသည်။ လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ခဲ့ရသည်။ ကိုလိုနီ အစိုးရကို မောင်းထုတ်ခဲ့ရသည့်အတွက်ကြောင့် တိုင်း ပြုပြည်ပြု တပ်မတော်တည်းဟူသော ဂုဏ်ကိုပိုင်ခဲ့ကြ သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် နှစ်နိုင်ငံစလုံး၏ နိုင်ငံရေးတွင် တပ်သည် ကြီးမားသည့်အစိတ်အပိုင်းကဲ့သို့ ပါဝင်နိုင် သည့် အစဉ်အလာဖြစ်လာသည်။ ထို့ပြင် နှစ်နိုင်ငံစလုံး မှ စစ်တပ်များကိုကြည့်လျှင် နိုင်ငံတော်နည်းပါးနေ သော ဘတ်ဂျက်က စစ်တပ်နှင့် မသက်ဆိုင်သလိုပင် စစ်တပ်ကို ထောက်ကူထားပေးသော စီးပွားရေး အကျိုး အမြတ်များနှင့် မကင်းပေ။ မြန်မာ့ တပ်မတော် ဆိုလျှင် အမြတ်အစွန်းကြီးမားလှသော ကျောက်စိမ်း လုပ်ငန်း များမှ အကျိုးအမြတ်ကို ရရှိနေခဲ့သည်။ နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှ စစ်တပ်များသည်လူ့အခွင့်အရေးကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ချိုးဖောက်သော သမိုင်းကြောင်းရှိ သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို မျှော်သောအခါ တစ်ချိန်က အင်ဒိုနီးရှား၏ မော်ဒယ်ကို အားကျခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် အင်ဒိုနီးရှားသည် Authoritarianism အာဏာရှင်စနစ်မှ တစိုက်မတ်မတ်ဖယ်ခွာရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သောအချိန်တွင် မြန်မာစစ်တပ်က အင်ဒိုနီးရှားကို ဆရာမတင်လိုတော့ပေ။ ယခုအချိန် တွင်မူ ဆူဟာတို၏ အင်ဒိုနီးရှားနှင့်နေဝင်း၏ မြန်မာ ပြည်ဟူ၍ ဆင်တူနှိုင်းဆခဲ့ဖူးသော နှစ်နိုင်ငံသည် လမ်းခွဲတွင် တစ်လမ်းစီ လျှောက်ခဲ့ကြပြီ ဖြစ်သည်။
ဆူဟာတိုသည် ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ် (ဘာကလေ)မှ ပြန်လာသော ဘာကလေ မာဖီးယား အုပ်စုဟုတွင်သည့် ခေတ်ပညာတတ်များကို အစိုးရထဲ ခေါ်သွင်းပြီး ဆယ်စုနှစ်များစွာ လက်သပ် မွေးခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်ကို ကမ္ဘာနှင့် ချိတ်ဆက်မိအောင်လမ်းဖွင့် ပေးခဲ့ပြီး ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ သည်။ ဆူဟာတိုသည် အင်ဒိုနီးရှားစီးပွားရေး၏ အစိတ် အပိုင်းများစွာကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတို့အကြိုက် ဖြေလျှော့ ပေးခဲ့သည်။ ရေတိုတွင် စီးပွားတက်ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၆ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။ နေဝင်းသည် တိုင်းပြည် ကို အထီးကျန်စေခဲ့ပြီး မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ဖြင့် သယံဇာတပေါများ လှသော နိုင်ငံတစ်ခုကို အလွန် ဆင်းရဲသော နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ တွင် အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွှတ်ပေးပြီးနောက် စစ်တပ် သည် စီးပွားရေးတွင် ဖြေလျှော့မှုများ စတင်ပြုလုပ် လာခဲ့သည်။ နိုင်ငံပွင့်လင်း လွတ်လပ်လာမှု အထိုက် အလျောက် ရှိလာသည့် အလျောက် လူနေမှုအဆင့် လည်း အတန်ငယ် မြင့်လာခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ၂၀၂၀ ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားလာချိန်တွင် တိုင်းပြည်စီးပွားရေး တစ်ဖန်ပြန်ကျုံ့ရသည့် အဖြစ်မျိုးနှင့် ကြုံကြိုက် ရသည်။ စစ်တပ်က ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် နေ့ အာဏာ သိမ်းလိုက်သောအခါ နိုင်ငံကို ကပ်ဘေး ပေါင်းစုံထဲ တွန်းထည့်လိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Fitch Solutions ဟူသော စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ အဖွဲ့က မြန်မာ့စီးပွားရေးမှာ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အထိ ကျုံ့ဝင်သွားနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
အတိုက်အခံများကို နှိမ်နင်းရာတွင် ရက်စက် သော ဆူဟာတိုသည်ပင်လျှင် တိုင်းပြည်တွင် ရွေး ကောက်ပွဲကို ငါးနှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပသည့် အစဉ် အလာကို ခိုင်မြဲအောင်တည်ဆောက်ခဲ့သေးသည်။ ထို ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကြောင့် တိုင်းပြည်သည် တည် ငြိမ်ခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတို့ ယုံကြည်ရလောက်သည့် နိုင်ငံဖြစ်လာစေသလို ゞင်း၏ နေရာကိုလည်း စစ်တပ် ၏ အထက်တွင် ဩဇာလွှမ်းမိုးနေအောင် ထိန်းထားနိုင် ခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းတွင် လူထောင်ချီ၍ သတ်ပြီး အာဏာသိမ်းလာခဲ့သော မြန်မာစစ်တပ်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က အနိုင်ရခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်များ နောက် ပိုင်း ၁၉၉၀ကျော်ကာလများတွင် မြန်မာစစ်တပ်သည် ဆူဟာတိုလက်အောက်အင်ဒိုနီးရှားကို လေ့လာရန် တပ်မတော်အရာရှိများကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
ဆူဟာတိုခေတ်၏ ထင်ရှားသော ပြယုဂ်တစ်ခု မှာ စစ်တပ်သည် နိုင်ငံရေးတွင်သာမက လူမှုစီးပွား ထဲတွင် ပင် အကြီးအကျယ်နေရာယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမူ ကို နှစ်ဌာနကြီးစိုးရေးမူ dual function (dwi fungsi) ဟု လူသိခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ပင်လည်း စစ်သားများသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲထည့်ခွင့် မရှိသော်လည်း နိုင်ငံရေးတွင် အလိုအလျောက် ပါလီ မန်၏အမတ် နေရာ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အုပ်စီးခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း များစွာအကြာတွင် မြန်မာသည် ထိုမူမျိုးကို အကောင်အထည်ဖော်လာခဲ့ပြီး ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ တပ်မတော်က စစ်တပ်က နိုင်ငံရေး တွင် အလိုအလျောက်ပါဝင်ခွင့်ကို လွှတ်တော်အမတ် နေရာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ပုံသေရယူခြင်းဖြင့် ခရီး ဆက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ရယူထားခြင်း ကြောင့် မည်သည့်အပြောင်းအလဲကိုမျှ စစ်တပ် သဘောမတူဘဲ မလုပ်နိုင်အောင် ပိတ်ဆို့ထားနိုင်ခဲ့ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ထိုအစီအစဉ်များစတင်ခဲ့ ချိန်တွင် အင်ဒိုနီးရှားသည် စစ်တပ်၏ နိုင်ငံရေး နေရာ အပိုင်စားယူခြင်းကို လုံးလုံးဖျက်သိမ်းခဲ့သည်မှာ ငါးနှစ်ပင်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ဆူဟာတိုအလွန် အင်ဒိုနီးရှားတွင် စစ်တပ်ကိုယ် တိုင်က ထို နိုင်ငံရေးထဲ အလိုအလျောက် နေရာယူခွင့် ကို တဖြည်းဖြည်းလူလျှော့သောစနစ်ဖြင့် စတင်နောက် ဆုတ်လာခဲ့သည်မှာ ၁၉၉၉ နောက်ပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀ဝ၀ တွင် အင်ဒိုနီးရှားတပ်က လွှတ်တော်ထဲမှ ယူနီ ဖောင်းဝတ်များကို ထုတ်ပစ်ရန် တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပြီး ၂၀ဝ၄ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် အပြီးတိုင်ရာနှုန်းပြည့် ဖယ်ရှားခဲ့ကြသည်။ စစ်တပ်က ထိုသို့ အမြင်မှန်ရလာ သောအခါတွင်လည်း ပြည်သူအများက ကြိုဆိုခဲ့ကြ သည်။ ယခု ဒုတိယသက်တမ်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ သော သမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုသည် စစ်ဘက်မှ လာသူတစ် ယောက်မဟုတ်ပေ။ သို့ရာတွင် အင်ဒိုနီးရှားတွင်လည်း စစ်ဘက်မှ လွှမ်းမိုးမှု အမြစ်မပြတ်နိုင်ဘဲရှိရာ ゞင်း၏ လက်ထက်တွင် အငြိမ်းစားစစ်ဗိုလ်ချုပ်များသည် အရေးပါသော ဝန်ကြီးရာထူးများနှင့် ကက်ဘိနက်တွင် နေရာဝင်ယူလာကြသည်။ သို့သော်လည်း စစ်တပ် သက်သက်အနေနှင့်မူ ပို၍ ပရောက်ဖက်ရှင်နယ် ဆန် လာခဲ့ပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်များ တွင် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အင်အား ဖြည့်တင်းပေးနေခဲ့သည်။
ဆူဟာတိုခေတ်က ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲများ တွင် အစိုးရဝန်ထမ်းများထံမှ မဲကို မရရအောင် ဆောင် ရွက်သော စနစ်များကို သုံးပြီး အာဏာခိုင်မြဲစေခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားတွင် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းပေါင်း သန်းပေါင်း များစွာရှိနေသလို အစိုးရက ဖွဲ့စည်းပေးထားသော အစိုးရကို ထောက်ခံသည့်အဖွဲ့အစည်းများကလည်း မိမိကို အမြဲမဲပေးရလေအောင် ဆူဟာတိုက ကြံဆောင် ခဲ့သည်။ မိမိရှေ့မှ ဆူကာနိုက ချမှတ်ခဲ့သော နိုင်ငံရေး စနစ်များနှင့် သွေဖည်လာခဲ့သော ဆူဟာတိုသည် ကွန်မြူ နစ်များနှင့် အခြားပါတီဝင်များကိုလည်း နိုင်ငံရေးတွင် မရှင်သန်နိုင်အောက် ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်ခဲ့သည်။ မိမိ၏ Golkar ပါတီမှလွဲ၍ အခြားပါတီနှစ်ခုကိုသာ ရွေး ကောက်ပွဲ ဝင်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်သော ထိုပါတီ သုံးခုစလုံးက ပဉ္စသီလတည်းဟူသော နိုင်ငံ ရေးအယူအဆကို သက်ဝင်အကောင်အထည်ဖော်ပါ မည်ဟု ဝန်ခံကတိပြုရသည်။ ရွေးကောက်ပွဲများကို ဆူဟာတိုက ဒီမိုကရေစီပွဲတော်ဟု နာမည်တပ်ခဲ့သော် လည်း အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝရန်မှာ ဝေးပါသေးသည်။
တပ်မတော်က အကောင်အထည်ဖော်နေသည် မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် USDP ကို Golkar ကဲ့သို့ နေရာ ယူနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ USDP တည်းဟူသော ပါတီ ယန္တရားပေါ်တွင် အငြိမ်းစား စစ်အရာရှိကြီးများကို ထည့်သွင်းမည်။ ၂၀၁၀ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD က ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ခဲ့သော ကြောင့် USDP က ဂိုကာနေရာကို မှန်းနိုင်ခဲ့သော် လည်း ၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၂၀ တွင် ခွက်ခွက်လန်အောင် မဲရှုံးသွားခဲ့သည်။ တပ်မတော်သည် USDP ကို ဂိုကာ နေရာတွင် ထားချင်သော်လည်း ဂိုကာကဲ့သို့ အင်အားရှိ လာအောင်ပင် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဟု ဂျာကာ တာ အခြေစိုက် Strategic and International Studies မှ အကြီးတန်းသုတေသီ Evan Laksmana က ပြော ကြားခဲ့သည်။
“မြန်မာက အင်ဒိုနီးရှား၏ ရွေးကောက်ပွဲမော် ဒယ်ကို နမူနာယူ၍ ကော်ပြီကူးခဲ့သော်လည်း တကယ် တမ်း ပေါ်ထွက်လာသည်မှာ “ဆိုးရွားသော မိတ္တူ|”တစ်ခုသာ အဖတ်တင်သည်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ မြန်မာသည် အင်ဒိုနီးရှားကဲ့သို့ proportional representation- PR မဲအချိုးအစားအတိုင်း အာဏာ ခွဲယူသော စနစ်ကို မသုံးခဲ့ဘဲ အနိုင်ရသူ အကုန်ယူ စနစ်ဖြစ်သည့်afirst-past-the-post ကို အနိုင်ရ လိုဇောနှင့် ရွေးခဲ့ခြင်းသည်လည်း ဂိုကာလမ်းစဉ်နှင့် မတူသည့်အချက်ဖြစ်သည်။
စစ်တပ်က အနိုင်ယူလိုဇောနှင့် အနိုင်ရသူ အကုန် ယူစနစ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့သော်လည်း တကယ်တမ်းတွင်မူ ထိုစနစ်က ゞင်းတို့လိုလားသော ရလဒ်ကို မပေးပေ။
အင်ဒိုနီးရှားတွင် လွှတ်တော်ထဲမှာ စစ်သားများ ကို ထုတ်ပစ်လိုက်ခဲ့ခြင်းမှာ ဆူဟာတိုခေတ် အလွန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏ ကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ် သည်။ သို့ရာတွင် သူ့ချည်းသက်သက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ သည်မဟုတ်ပါ။ အခြားအရေးကြီးသော ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှုများကို ]Reformasi} ခေတ်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါ သည်။ ဆူဟာတိုခေတ်အလွန်တွင် တက်လာသော သမ္မတ B.J. Habibie သည် သူ၏ မင်းဆရာဖြစ်ခဲ့ဖူး သော ဆူဟာတို၏ ပုံစံခွက်ထဲမှ လိုလိုလားလား ရဲရဲ တင်းတင်း ခွဲထွက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကို လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ အရှေ့တီမောအတွက် နိုင်ငံလုံး ဆန္ဒ ခံယူပွဲကျင်းပရသည်။ သမ္မတတစ်ဦးလျှင် သက် တမ်းငါးနှစ် နှစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခွင့် မရှိအောင်၊ နိုင်ငံသားတိုင်းက သမ္မတကို တိုက်ရိုက် တင်မြှောက်ခွင့်ရအောင် ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးအကြိမ် လူတိုင်း က သမ္မတကို တိုက်ရိုက် ရွေးချယ်နိုင်သော ရွေးကောက် ပွဲ ကို ၂၀ဝ၄ တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ဆူဟာတို ထွက်ခွာပြီး ၆ နှစ်အကြာတွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အနိုင်ရသူ မှာ အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သော ဆူဆီလို ဗန်ဘန်းယူဒိုယိုနိုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယူဒိုယိုနိုလက်ထက်တွင် အင်ဒိုနီးရှားသည် မြန်မာ ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အကြံပေးနေဆဲ ဖြစ် သည်။ အင်ဒိုနီးရှား၏ လမ်းစဉ်သစ်များအကြောင်း ပြောပြပြီး ဒီမိုကရေစီ အကူးအပြောင်းအတွက် တရား ဟောခဲ့သည့် အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ ယူဒိုယိုနို လက်ထက်အထိ ရှိခဲ့ကြသည်။
Laksmana က “ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော် တို့ သမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကို ပြောပြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တပ်မတော်က လိုချင်တာက တိုင်းပြည်ကိုလည်း သူတို့ လက်ထဲထားမယ်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဒီမို ကရေစီကို ပြောင်းလဲနေပြီဆိုတဲ့ ပုံရိပ်လည်း လိုချင်တယ်” ပြောကြားသည်။ တကယ်တမ်းကျ တပ်မတော် မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစစ်စစ်ကို လိုချင်တဲ့ အုပ်စုရယ် လို့ မရှိတာဗျဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်မှ ကြယ်သုံးပွင့်ရ ဗိုလ်ချုပ် ဝီဂျိုဂျိုကမူ အင်ဒိုနီးရှား အတွေ့အကြုံမှ ကောင်း ကောင်း အသုံးဝင်ခဲ့ပြီးတော့ အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ လိုနေတဲ့ အရာနှစ်ခုရှိပါတယ်ဟု ဆိုသည်။ ပထမ တစ်ခုသည် ငါးပါးသီလဟု ခေါ်သော ဆူကာနို ၁၉၄၅ တွင် ချမှတ်ခဲ့ သည့် နိုင်ငံရေး သဘောတရားဖြစ်သည်။ ထိုအထဲမှ သီလတစ်ပါးမှာ ဒီမိုကရေစီကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်အင်ဒိုနီးရှား၏ နိုင်ငံရေး ငါးပါးသီလကဲ့သို့သော နိုင်ငံတစ်တန်းရှိ လူမျိုးစုံကို တစ်သားတည်း ချည်နှောင်ထားနိုင်သည့် အတွေး အမြင် အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီမရှိခြင်းက အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ကွာခြားသည်ဟုဆိုသည်။ ဒုတိယတစ်ခုနှင့် မြန်မာ သည် ကမ္ဘာနှင့် မကြာခဏ အဆက်ပြတ်သွားရပြီး အဆက်အဆံနည်းခြင်းကြောင့်ပိုဆိုးသွားရသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟု ゞင်းကဆိုသည်။ မလေးရှားကို လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးကောက်သော ကြောင့် ဆူကာနိုသည် ၁၉၆၅ တွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ထဲမှာ အင်ဒိုနီးရှားကို ထုတ်ပစ်လိုက်သော်လည်း ၁၉၆၆ ဆူဟာတို တက်လာသောအခါ အဖွဲ့ဝင်ပြန်ဖြစ် လာခဲ့သည်။ ထိုကာလများကတည်းက နိုင်ငံပြင်ပတွင် ပညာသင်သွားခဲ့သော အင်ဒိုနီးရှားမှ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ၊ စစ်အရာရှိများရှိခဲ့ကြ သည်။
ယခုရှင်းပြနေသော ဝီဂျိုဂျိုပင်လည်း အမေရိက နှင့် အခြားတိုင်းပြည်များတွင် ပညာသင်ရသော မျိုးဆက်များတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားအများ စုသည် ပညာတော်သင်ပြီးဆုံးလျှင် အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြပြီး ゞင်းတို့၏ တတ်သိလိမ္မာမှုများနှင့် ကမ္ဘာကြည့်ကြည့် မြင်နိုင်မှုများကို ယူဆောင်လာခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ ပြည်ပတွင် အခြေမချဘဲ နိုင်ငံသို့ ပညာဖြင့် ပြန်လာ သူက အများစု ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
“ခင်ဗျားတိုင်းပြည်ကို အခြားနေရာတွေနဲ့ နှိုင်း ယှဉ်ကြည့်စရာမလိုဘူးထင်ရင် ခင်ဗျားတိုးတက်တော့ မှာ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာစစ်တပ်ကတော့ သူတို့ကိုယ် သူတို့ပဲ အကောင်းဆုံးထင်တာ။ အဓိကကတော့ နိုင်ငံ ကို ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ကြတဲ့ အကျိုးဆက်တွေပဲ”ဟု ဝီဂျိုဂျို က ပြောကြားသည်။
မြန်မာခေါင်းဆောင်များနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများ ဆက်ဆံရေးအပေါ်မူတည်၍ အချို့နှစ်များတွင် မြန်မာ က စစ်အရာရှိများကို အမေရိကသို့ ပညာသင်ပို့ခဲ့ဖူး သည်။ သို့ရာတွင် ထိုပညာတော်သင်များသည် အမေ ရိကန်အရာရှိများနှင့် ရောရောနှောနှော မနေတတ်ကြ ပေ။ အမေရိကန်တို့သည် မြန်မာ၏ အကြောင်းများကို သိချင်သောကြောင့် စကားနှိုက်လိုသော သူလျှိုများ ဖြစ်ကြသည်ဟူသော မှာကြားချက်များကြောင့် မြန်မာ အရာရှိများမှာ ပေါင်းသင်းခြင်းမပြုကြပေ။ ထို့ပြင် စစ်တန်းလျားများတွင် ဘီဘီစီနှင့် နိုင်ငံခြားရေဒီယို ရုပ်သံများကို နားထောင်ခွင့်မပေးဘဲ အစိုးရ ဝါဒဖြန့်ချိ ရေးယန္တရားများမှ ထုတ်လွှင့်မှုများသာ ကြားရလေ့ ရှိ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ တစ်ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင် တပ်မတော်ကို အာဏာ ထိန်းချုပ်မှုကို မြန်မာပြည်သူတို့က ငြင်းပယ်ကြောင်း နည်းမျိုးစုံနှင့် ဆန္ဒပြနေကြသည်။ အထူးသဖြင့် နည်းပညာကိုကျွမ်း ကျင်သော လူငယ်များသည် တပ်မတော်ကို အယုံ အကြည်မရှိသလို သူတို့ကျင်းပပေးမည့် ရွေးကောက် ပွဲမှာလည်း မျှတပြီး ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျမည်ဟု မထင်ပေ။
“အရပ်ဘက်နဲ့ စစ်ဘက်ကြားမှာ ယုံကြည်မှုကို မှန်မှန်ကန်ကန်မတည်ဆောက်နိုင်ဘဲနဲ့တော့ ဒီမိုက ရေစီကို ကူးပြောင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ မြန်မာ ပြည်မှာ အခုဖြစ်နေတာကတော့ ယုံကြည်ချက်ဆိုလို့ တစ်ပြားသားမှ မကျန်တော့တာပဲ” ဟု ဝီဂျိုဂျိုက ဆို သည်။
(The Diplomat သတင်းဌာနမှ ဆောင်းပါးရှင် ရစ်ချတ်ဘောဆတ် (Richard Borsuk) ရေးသား သည့် With Recent Coup, Myanmar’s Military Diverges From the Indonesian Path ကို RISE News အယ်ဒီတာအဖွဲ့က ဘာသာပြန်သည်။)
၁၉၉၈ နောကျပိုငျး ဆူဟာတိုအလှနျ အငျဒိုနီးရှားနှငျ့ မတူသောလမျးကို မွနျမာက ရှေးခယျြခဲ့သညျမှာ ထငျရှားခဲ့ပွီ။
မွနျမာစဈတပျက အာဏာသိမျးပွီး ခွောကျပတျအကွာ မတျလထဲတှငျ အငျဒိုနီးရှားက မွနျမာစဈတပျသို့ ကမျးလှမျးခကျြတဈရပျ ပေးပို့ခဲ့သညျ။ ဒီမိုကရစေီစနဈဖွငျ့သှားနသေော နိုငျငံတှငျ တပျမြားကို မညျသို့ ပရျောဖကျရှငျနယျဖွဈလာအောငျ တညျဆောကျကွမညျနညျးဆိုသော အတှအေ့ကွုံမြား အငျဒိုနီးရှားတှငျ ရှိကွောငျး၊ ထိုအတှအေ့ကွုံမြားကို ဝမြှေလိုကွောငျး အငျဒိုနီးရှား ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျကိုယျတိုငျ ကမျးလှမျးခဲ့သညျ။ လတေပျစဈဦးစီးခြုပျ အဒီတီဂြာဂနျြတိုအနနှေငျ့ စိတျရငျးစတေနာကို အခွခေံကာ ကမျးလှမျးခဲ့သျောလညျး မွနျမာ ဘကျက လကျမခံခဲ့ပေ။ မွနျမာစဈတပျသညျ ဆယျစုနှဈအခြို့အလှနျက အငျဒိုနီးရှားလြှောကျခဲ့ သညျလမျးကို လလေ့ာရနျ အရာရှိမြားကို ဂြာကာတာသို့ စလှေတျခဲ့ဖူးသညျ။ ယခုအခါ တှငျမူ မွနျမာစဈတပျသညျ အာဏာရှငျစနဈမှ ဒီမိုကရစေီသို့ ကူးပွောငျးရေး သမိုငျးထဲမှ သငျခနျးစာကို သငျယူရနျ စိတျကူးမရှိတော့ပေ။ ၁၉၉၈ ဆူဟာတို ရုပျပကျြဆငျးပကျြ ပွုတျကသြှားခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးတှငျ အငျဒိုနီးရှားစဈတပျသညျ နိုငျငံရေးတှငျ ပါဝငျနသေော မိမိတို့၏ အခနျးကဏ်ဍကို တမငျပငျ ဖကျြသိမျးခဲ့သညျ။ ယခု မွနျမာနိုငျငံက လိုအပျနသေညျမှာ ထိုကဲ့သို့သော အပွောငျးအလဲဖွဈသညျ။
ဖဖေျောဝါရီတဈရကျနတှေ့ငျ ဖွဈပှားခဲ့သော စဈအာဏာသိမျးခွငျးကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံမှ အခွမေခိုငျ တတျသေးသော ဒီမိုကရစေီယိုငျလဲခဲ့ရသညျ။ ဤတှငျ မွနျမာစဈတပျ၏ ရှေးခယျြမှုသညျ အငျဒိုနီးရှားလမျးစဉျ နှငျ့ လုံးဝသှဖေညျသှားပပွေီ။
လောလောဆယျ မွနျမာစဈတပျက ထိုငျးစဈတပျ ၏ နမူနာကို မကျြစိကနြသေညျ။ စဈအာဏာသိမျးပွီး ဆယျရကျခနျ့အကွာတှငျ ဗိုလျခြုပျမှုးကွီး မငျးအောငျ လှိုငျသညျ ထိုငျးနိုငျငံ၏ ဝနျကွီးခြုပျပရာယှတျခနျြအိုခြာ ထံ ဒီမိုကရစေီစနဈ တညျဆောကျနိုငျရေးအတှကျ အကူအညီမြားပေးပါရနျ တောငျးခံခဲ့သညျ။ ၂၀၁၄ တှငျ စဈအာဏာသိမျးခဲ့ပွီး ဒီမိုကရစေီနညျးကြ ရှေးကောကျ ခံ ထားရသော ထိုငျးဝနျကွီးခြုပျကို ဖယျရှားခဲ့သူ ပရာ ယှတျထံမှ ဒီမိုကရစေီနညျးလမျးကို တောငျးခံနပွေနျ သညျ။ ပရာယှတျ၏မူမှာ မိမိအာဏာစကျကို ဖွနျ့ကကျြ နိုငျအောငျ နိုငျငံရေးအခငျးအကငျြးကို ပွနျတညျယူခွငျး ဖွဈသညျ။ ထိုငျးရေးရာကြှမျးကငျြသူ Paul Chambers ကမူ တဈဝကျတဈပကျြဒီမိုကရစေီ သို့မဟုတျ အမညျခံ ဒီမိုကရစေီဟုချေါသညျ။ ထိုပရာယှတျ ဦးဆောငျသော ထိုငျးအစိုးရသညျ မွနျမာစဈတပျ၏ အာဏာသိမျးသော လုပျရပျကို မရှုတျခခြဲ့ပါ။ မွနျမာပွညျတှငျးရေးသာ ဖွဈသညျဟု ဆိုနခေဲ့သညျ။ သို့ရာတှငျ အငျဒိုနီးရှားကမူ ပွတျပွတျသားသား ဝဖေနျခဲ့ပွီး တပျမတျော၏ ရကျစကျ ကွမျးကွုတျသော နှိမျနငျးမှုမြားကို ရှုတျခကြာ ဒျေါအောငျ ဆနျးစုကွညျ ပွနျလညျလှတျမွောကျရေး အတှကျ တောငျးဆိုခဲ့သညျ။ လူပေါငျးတဈရာကြျောကို စဈတပျက သတျပဈခဲ့သညျ့ မတျလ ၂၇ နေ့ နပွေညျ တျောတှငျ ကငျြးပ သော တပျမတျောနေ့ အခမျးအနား ကို အငျဒိုနီးရှား စဈသံမှူးမြားကလညျး ထိုငျးစဈသံမှူး မြားကဲ့သို့ မတကျရောကျခဲ့ပါ။
အငွိမျးစားဗိုလျခြုပျကွီး ဆူဟာတိုကို ၃၂ နှဈ ကွာမြှ ကြောထောငျ့နောကျခံပွုပေးခဲ့သော အငျဒိုနီး ရှားစဈတပျသညျ မိမိကိုလူကွိုကျနညျးလာသညျ့အခြိနျ တှငျ မိမိ၏ကရြှုံးမှုကို လကျခံရပါသညျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျမူ တပျမတျောသညျ မိမိ၏ လကျ ကိုငျတုတျ USDP ပါတီက ပွီးခဲ့သညျ့ ရှေးကောကျပှဲ တှငျ ပွညျသူတို့က မထောကျခံသဖွငျ့ မဲရှုံးသညျကို ပငျ မဲလိမျမှုမြားကွောငျ့ ရှုံးရသညျဟု တငျးခံခဲ့သော ကွောငျ့ အငျဒိုနီးရှားစဈတပျကဲ့ ဆုတျခြိနျတနျလြှငျ ပွနျဆုတျမညျ့လမျး မမွငျပေ။
“မွနျမာစဈတပျက သူတို့ကသာလြှငျ တိုငျးပွညျ ကို မပွိုကှဲအောငျ ကာကှယျနိုငျမညျ့သူတှေ ဖွဈတယျ ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကိုငျစှဲထားတုနျးပဲ”ဟု ဆူဟာတို ပွုတျအကတြှငျ စဈတပျအတှကျ အရေးကွီးသော ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုမြား ဆောငျရှကျရာတှငျ တာဝနျယူ ခဲ့ရသူ အငွိမျးစားဗိုလျမှူးခြုပျ အောဂကျဈ ဝီဂြိုဂြိုက ပွောကွားသညျ။
“အခု မွနျမာစဈတပျဖွဈနတေဲ့ပုံစံက ၁၉၈၀ ကြျောကာလတှကေ ပုံစံမြိုးဗြ”ဟု ၎င်းငျးကဆိုသညျ။ ၁၉၉၆-၁၉၉၈ အာရှငှကွေေးအကပျြအတညျးကွောငျ့ ပွဿနာမြား ဆကျတိုကျဖွဈလာပွီးနောကျ လူရာခြီ သဆေုံးခဲ့ရသော အွှုံကမှုမြားအပွီး ဆူဟာတိုပွုတျ ကခြဲ့သညျ့ဖွဈစဉျမှ မွနျမာစဈတပျသညျ တရားမရ နိုငျဘဲ ရှိသညျ။
အငျဒိုနီးရှားစဈတပျရဲ့ ဆူဟာတိုအလှနျ ပွုပွငျ ပွောငျးလဲရေးတှမှော မွနျမာကယူမယျဆိုရငျ ရကောငျး တဲ့ အသုံးတညျ့နိုငျတဲ့ သငျခနျးစာတှေ အမြားကွီးရှိ တယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒါတှကေို ယူမယျ့အစား မွနျမာ စဈတပျက ၁၉၉၈ မတိုငျခငျက အငျဒိုနီးရှားစဈတပျ မျောဒယျကိုပဲ အားကနြတောဟု စငျကာပူ The S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) မှ အငျဒိုနီးရှား အစီအစဉျ ညှိနှိုငျး ရေးမှုး Leonard Sebastian က ပွောကွားသညျ။
သမိုငျးကွောငျး ဖွတျသနျးမှုအရ အငျဒိုနီးရှား စဈတပျနှငျ့ မွနျမာစဈတပျတို့ တူညီသော အခကျြမြား ရှိသညျ။ လှတျလပျရေးအတှကျ တိုကျခဲ့ရသညျ။ ကိုလိုနီ အစိုးရကို မောငျးထုတျခဲ့ရသညျ့အတှကျကွောငျ့ တိုငျး ပွုပွညျပွု တပျမတျောတညျးဟူသော ဂုဏျကိုပိုငျခဲ့ကွ သညျ။ ထို့ကွောငျ့ပငျ နှဈနိုငျငံစလုံး၏ နိုငျငံရေးတှငျ တပျသညျ ကွီးမားသညျ့အစိတျအပိုငျးကဲ့သို့ ပါဝငျနိုငျ သညျ့ အစဉျအလာဖွဈလာသညျ။ ထို့ပွငျ နှဈနိုငျငံစလုံး မှ စဈတပျမြားကိုကွညျ့လြှငျ နိုငျငံတျောနညျးပါးနေ သော ဘတျဂကျြက စဈတပျနှငျ့ မသကျဆိုငျသလိုပငျ စဈတပျကို ထောကျကူထားပေးသော စီးပှားရေး အကြိုး အမွတျမြားနှငျ့ မကငျးပေ။ မွနျမာ့ တပျမတျော ဆိုလြှငျ အမွတျအစှနျးကွီးမားလှသော ကြောကျစိမျး လုပျငနျး မြားမှ အကြိုးအမွတျကို ရရှိနခေဲ့သညျ။ နှဈနိုငျငံစလုံးမှ စဈတပျမြားသညျလူ့အခှငျ့အရေးကို ဆိုးဆိုးရှားရှား ခြိုးဖောကျသော သမိုငျးကွောငျးရှိ သညျ။ ထို့ကွောငျ့ မွနျမာသညျ ပွုပွငျပွောငျးလဲရေးကို မြှျောသောအခါ တဈခြိနျက အငျဒိုနီးရှား၏ မျောဒယျကို အားကခြဲ့သညျ။
သို့ရာတှငျ အငျဒိုနီးရှားသညျ Authoritarianism အာဏာရှငျစနဈမှ တစိုကျမတျမတျဖယျခှာရနျ ဆုံးဖွတျလိုကျသောအခြိနျတှငျ မွနျမာစဈတပျက အငျဒိုနီးရှားကို ဆရာမတငျလိုတော့ပေ။ ယခုအခြိနျ တှငျမူ ဆူဟာတို၏ အငျဒိုနီးရှားနှငျ့နဝေငျး၏ မွနျမာ ပွညျဟူ၍ ဆငျတူနှိုငျးဆခဲ့ဖူးသော နှဈနိုငျငံသညျ လမျးခှဲတှငျ တဈလမျးစီ လြှောကျခဲ့ကွပွီ ဖွဈသညျ။
ဆူဟာတိုသညျ ကယျလီဖိုးနီးယားတက်ကသိုလျ (ဘာကလေ)မှ ပွနျလာသော ဘာကလေ မာဖီးယား အုပျစုဟုတှငျသညျ့ ခတျေပညာတတျမြားကို အစိုးရထဲ ချေါသှငျးပွီး ဆယျစုနှဈမြားစှာ လကျသပျ မှေးခဲ့သညျ။ တိုငျးပွညျကို ကမ်ဘာနှငျ့ ခြိတျဆကျမိအောငျလမျးဖှငျ့ ပေးခဲ့ပွီး ပုဂ်ဂလိက ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြားကို ဖိတျချေါခဲ့ သညျ။ ဆူဟာတိုသညျ အငျဒိုနီးရှားစီးပှားရေး၏ အစိတျ အပိုငျးမြားစှာကို ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတို့အကွိုကျ ဖွလြှေော့ ပေးခဲ့သညျ။ ရတေိုတှငျ စီးပှားတကျခဲ့ပွီး တဈနှဈလြှငျ ၆ ရာခိုငျနှုနျး တိုးတကျခဲ့သညျ။ နဝေငျးသညျ တိုငျးပွညျ ကို အထီးကနျြစခေဲ့ပွီး မွနျမာ့ဆိုရှယျလဈ လမျးစဉျဖွငျ့ သယံဇာတပေါမြား လှသော နိုငျငံတဈခုကို အလှနျ ဆငျးရဲသော နိုငျငံတဈခု ဖွဈစခေဲ့သညျ။ ၂၀၁၀ တှငျ အောငျဆနျးစုကွညျကို နအေိမျအကယျြခြုပျမှ လှတျပေးပွီးနောကျ စဈတပျ သညျ စီးပှားရေးတှငျ ဖွလြှေော့မှုမြား စတငျပွုလုပျ လာခဲ့သညျ။ နိုငျငံပှငျ့လငျး လှတျလပျလာမှု အထိုကျ အလြောကျ ရှိလာသညျ့ အလြောကျ လူနမှေုအဆငျ့ လညျး အတနျငယျ မွငျ့လာခဲ့သညျ။ သို့ရာတှငျ ၂၀၂၀ ကိုဗဈ-၁၉ ဖွဈပှားလာခြိနျတှငျ တိုငျးပွညျစီးပှားရေး တဈဖနျပွနျကြုံ့ရသညျ့ အဖွဈမြိုးနှငျ့ ကွုံကွိုကျ ရသညျ။ စဈတပျက ဖဖေျောဝါရီ ၁ ရကျ နေ့ အာဏာ သိမျးလိုကျသောအခါ နိုငျငံကို ကပျဘေး ပေါငျးစုံထဲ တှနျးထညျ့လိုကျသကဲ့သို့ ဖွဈလာခဲ့သညျ။ Fitch Solutions ဟူသော စီးပှားရေးအတိုငျပငျခံ အဖှဲ့က မွနျမာ့စီးပှားရေးမှာ ၂၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျ အထိ ကြုံ့ဝငျသှားနိုငျသညျဟု ခနျ့မှနျးထားသညျ။
အတိုကျအခံမြားကို နှိမျနငျးရာတှငျ ရကျစကျ သော ဆူဟာတိုသညျပငျလြှငျ တိုငျးပွညျတှငျ ရှေး ကောကျပှဲကို ငါးနှဈတဈကွိမျကငျြးပသညျ့ အစဉျ အလာကို ခိုငျမွဲအောငျတညျဆောကျခဲ့သေးသညျ။ ထို ရှေးကောကျပှဲစနဈကွောငျ့ တိုငျးပွညျသညျ တညျ ငွိမျခဲ့ပွီး ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတို့ ယုံကွညျရလောကျသညျ့ နိုငျငံဖွဈလာစသေလို ゞငျး၏ နရောကိုလညျး စဈတပျ ၏ အထကျတှငျ ဩဇာလှမျးမိုးနအေောငျ ထိနျးထားနိုငျ ခဲ့သညျ။ ၁၉၈၈ အရေးအခငျးတှငျ လူထောငျခြီ၍ သတျပွီး အာဏာသိမျးလာခဲ့သော မွနျမာစဈတပျသညျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဦးဆောငျသော အမြိုးသား ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျက အနိုငျရခဲ့သော ရှေးကောကျပှဲ ရလဒျကို ငွငျးပယျခဲ့သညျ။ ထိုအဖွဈအပကျြမြား နောကျ ပိုငျး ၁၉၉၀ကြျောကာလမြားတှငျ မွနျမာစဈတပျသညျ ဆူဟာတိုလကျအောကျအငျဒိုနီးရှားကို လလေ့ာရနျ တပျမတျောအရာရှိမြားကို စလှေတျခဲ့သညျ။
ဆူဟာတိုခတျေ၏ ထငျရှားသော ပွယုဂျတဈခု မှာ စဈတပျသညျ နိုငျငံရေးတှငျသာမက လူမှုစီးပှား ထဲတှငျ ပငျ အကွီးအကယျြနရောယူထားခွငျးဖွဈသညျ။ ထိုမူ ကို နှဈဌာနကွီးစိုးရေးမူ dual function (dwi fungsi) ဟု လူသိခဲ့ကွသညျ။ ထို့ကွောငျ့ပငျလညျး စဈသားမြားသညျ ရှေးကောကျပှဲတှငျ မဲထညျ့ခှငျ့ မရှိသျောလညျး နိုငျငံရေးတှငျ အလိုအလြောကျ ပါလီ မနျ၏အမတျ နရော ၂၀ ရာခိုငျနှုနျးကို အုပျစီးခဲ့သညျ။ နှဈပေါငျး မြားစှာအကွာတှငျ မွနျမာသညျ ထိုမူမြိုးကို အကောငျအထညျဖျောလာခဲ့ပွီး ၂၀ဝ၈ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒအေရ တပျမတျောက စဈတပျက နိုငျငံရေး တှငျ အလိုအလြောကျပါဝငျခှငျ့ကို လှတျတျောအမတျ နရော ၂၅ ရာခိုငျနှုနျးကို ပုံသရေယူခွငျးဖွငျ့ ခရီး ဆကျခဲ့သညျ။ ထိုသို့ ၂၅ ရာခိုငျနှုနျးကို ရယူထားခွငျး ကွောငျ့ မညျသညျ့အပွောငျးအလဲကိုမြှ စဈတပျ သဘောမတူဘဲ မလုပျနိုငျအောငျ ပိတျဆို့ထားနိုငျခဲ့ သညျ။ မွနျမာနိုငျငံ တှငျ ထိုအစီအစဉျမြားစတငျခဲ့ ခြိနျတှငျ အငျဒိုနီးရှားသညျ စဈတပျ၏ နိုငျငံရေး နရော အပိုငျစားယူခွငျးကို လုံးလုံးဖကျြသိမျးခဲ့သညျမှာ ငါးနှဈပငျကွာခဲ့ပွီဖွဈသညျ။
ဆူဟာတိုအလှနျ အငျဒိုနီးရှားတှငျ စဈတပျကိုယျ တိုငျက ထို နိုငျငံရေးထဲ အလိုအလြောကျ နရောယူခှငျ့ ကို တဖွညျးဖွညျးလူလြှော့သောစနဈဖွငျ့ စတငျနောကျ ဆုတျလာခဲ့သညျမှာ ၁၉၉၉ နောကျပိုငျးတှငျ စတငျခဲ့ပွီး ၂၀ဝ၀ တှငျ အငျဒိုနီးရှားတပျက လှတျတျောထဲမှ ယူနီ ဖောငျးဝတျမြားကို ထုတျပဈရနျ တရားဝငျကွညောခဲ့ပွီး ၂၀ဝ၄ ရှေးကောကျပှဲအပွီးတှငျ အပွီးတိုငျရာနှုနျးပွညျ့ ဖယျရှားခဲ့ကွသညျ။ စဈတပျက ထိုသို့ အမွငျမှနျရလာ သောအခါတှငျလညျး ပွညျသူအမြားက ကွိုဆိုခဲ့ကွ သညျ။ ယခု ဒုတိယသကျတမျး တာဝနျထမျးဆောငျနေ သော သမ်မတဂြိုကိုဝီဒိုဒိုသညျ စဈဘကျမှ လာသူတဈ ယောကျမဟုတျပေ။ သို့ရာတှငျ အငျဒိုနီးရှားတှငျလညျး စဈဘကျမှ လှမျးမိုးမှု အမွဈမပွတျနိုငျဘဲရှိရာ ゞငျး၏ လကျထကျတှငျ အငွိမျးစားစဈဗိုလျခြုပျမြားသညျ အရေးပါသော ဝနျကွီးရာထူးမြားနှငျ့ ကကျဘိနကျတှငျ နရောဝငျယူလာကွသညျ။ သို့သျောလညျး စဈတပျ သကျသကျအနနှေငျ့မူ ပို၍ ပရောကျဖကျရှငျနယျ ဆနျ လာခဲ့ပွီး ကိုဗဈ-၁၉ ကာကှယျဆေးထိုးအစီအစဉျမြား တှငျ ထောကျပံ့ပို့ဆောငျရေးလုပျငနျးမြားတှငျ အငျအား ဖွညျ့တငျးပေးနခေဲ့သညျ။
ဆူဟာတိုခတျေက ပါလီမနျရှေးကောကျပှဲမြား တှငျ အစိုးရဝနျထမျးမြားထံမှ မဲကို မရရအောငျ ဆောငျ ရှကျသော စနဈမြားကို သုံးပွီး အာဏာခိုငျမွဲစခေဲ့သညျ။ အငျဒိုနီးရှားတှငျ ပွညျသူ့ဝနျထမျးပေါငျး သနျးပေါငျး မြားစှာရှိနသေလို အစိုးရက ဖှဲ့စညျးပေးထားသော အစိုးရကို ထောကျခံသညျ့အဖှဲ့အစညျးမြားကလညျး မိမိကို အမွဲမဲပေးရလအေောငျ ဆူဟာတိုက ကွံဆောငျ ခဲ့သညျ။ မိမိရှမှေ့ ဆူကာနိုက ခမြှတျခဲ့သော နိုငျငံရေး စနဈမြားနှငျ့ သှဖေညျလာခဲ့သော ဆူဟာတိုသညျ ကှနျမွူ နဈမြားနှငျ့ အခွားပါတီဝငျမြားကိုလညျး နိုငျငံရေးတှငျ မရှငျသနျနိုငျအောကျ ဖိနှိပျခြုပျခွယျခဲ့သညျ။ မိမိ၏ Golkar ပါတီမှလှဲ၍ အခွားပါတီနှဈခုကိုသာ ရှေး ကောကျပှဲ ဝငျခှငျ့ပေးခဲ့သညျ။ ရှေးကောကျပှဲဝငျသော ထိုပါတီ သုံးခုစလုံးက ပဉ်စသီလတညျးဟူသော နိုငျငံ ရေးအယူအဆကို သကျဝငျအကောငျအထညျဖျောပါ မညျဟု ဝနျခံကတိပွုရသညျ။ ရှေးကောကျပှဲမြားကို ဆူဟာတိုက ဒီမိုကရစေီပှဲတျောဟု နာမညျတပျခဲ့သျော လညျး အဓိပ်ပာယျပွညျ့ဝရနျမှာ ဝေးပါသေးသညျ။
တပျမတျောက အကောငျအထညျဖျောနသေညျ မှာ မွနျမာနိုငျငံတှငျ USDP ကို Golkar ကဲ့သို့ နရော ယူနိုငျရနျဖွဈသညျ။ USDP တညျးဟူသော ပါတီ ယန်တရားပျေါတှငျ အငွိမျးစား စဈအရာရှိကွီးမြားကို ထညျ့သှငျးမညျ။ ၂၀၁၀ တှငျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ NLD က ရှေးကောကျပှဲကို သပိတျမှောကျခဲ့သော ကွောငျ့ USDP က ဂိုကာနရောကို မှနျးနိုငျခဲ့သျော လညျး ၂၀၁၅ နှငျ့ ၂၀၂၀ တှငျ ခှကျခှကျလနျအောငျ မဲရှုံးသှားခဲ့သညျ။ တပျမတျောသညျ USDP ကို ဂိုကာ နရောတှငျ ထားခငျြသျောလညျး ဂိုကာကဲ့သို့ အငျအားရှိ လာအောငျပငျ တညျဆောကျနိုငျခဲ့ခွငျးမရှိဟု ဂြာကာ တာ အခွစေိုကျ Strategic and International Studies မှ အကွီးတနျးသုတသေီ Evan Laksmana က ပွော ကွားခဲ့သညျ။
“မွနျမာက အငျဒိုနီးရှား၏ ရှေးကောကျပှဲမျော ဒယျကို နမူနာယူ၍ ကျောပွီကူးခဲ့သျောလညျး တကယျ တမျး ပျေါထှကျလာသညျမှာ “ဆိုးရှားသော မိတ်တူ|”တဈခုသာ အဖတျတငျသညျ”ဟု ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။ မွနျမာသညျ အငျဒိုနီးရှားကဲ့သို့ proportional representation- PR မဲအခြိုးအစားအတိုငျး အာဏာ ခှဲယူသော စနဈကို မသုံးခဲ့ဘဲ အနိုငျရသူ အကုနျယူ စနဈဖွဈသညျ့afirst-past-the-post ကို အနိုငျရ လိုဇောနှငျ့ ရှေးခဲ့ခွငျးသညျလညျး ဂိုကာလမျးစဉျနှငျ့ မတူသညျ့အခကျြဖွဈသညျ။
စဈတပျက အနိုငျယူလိုဇောနှငျ့ အနိုငျရသူ အကုနျ ယူစနဈကို ရှေးခယျြခဲ့သျောလညျး တကယျတမျးတှငျမူ ထိုစနဈက ゞငျးတို့လိုလားသော ရလဒျကို မပေးပေ။
အငျဒိုနီးရှားတှငျ လှတျတျောထဲမှာ စဈသားမြား ကို ထုတျပဈလိုကျခဲ့ခွငျးမှာ ဆူဟာတိုခတျေ အလှနျ ပွုပွငျပွောငျးလဲရေး၏ ကွီးမားသော အစိတျအပိုငျးဖွဈ သညျ။ သို့ရာတှငျ သူ့ခညျြးသကျသကျ ဆောငျရှကျခဲ့ သညျမဟုတျပါ။ အခွားအရေးကွီးသော ပွုပွငျပွောငျး လဲမှုမြားကို ]Reformasi} ခတျေတှငျ ဆောငျရှကျခဲ့ရပါ သညျ။ ဆူဟာတိုခတျေအလှနျတှငျ တကျလာသော သမ်မတ B.J. Habibie သညျ သူ၏ မငျးဆရာဖွဈခဲ့ဖူး သော ဆူဟာတို၏ ပုံစံခှကျထဲမှ လိုလိုလားလား ရဲရဲ တငျးတငျး ခှဲထှကျခဲ့သညျ။ နိုငျငံရေးအကဉျြးသားမြား ကို လှတျပေးခဲ့သညျ။ အရှတေီ့မောအတှကျ နိုငျငံလုံး ဆန်ဒ ခံယူပှဲကငျြးပရသညျ။ သမ်မတတဈဦးလြှငျ သကျ တမျးငါးနှဈ နှဈကွိမျထကျပို၍ တာဝနျ ထမျးဆောငျခှငျ့ မရှိအောငျ၊ နိုငျငံသားတိုငျးက သမ်မတကို တိုကျရိုကျ တငျမွှောကျခှငျ့ရအောငျ ဖှဲ့စညျး အုပျခြုပျပုံအခွခေံ ဥပဒကေို ပွငျဆငျခဲ့သညျ။ ပထမဆုံးအကွိမျ လူတိုငျး က သမ်မတကို တိုကျရိုကျ ရှေးခယျြနိုငျသော ရှေးကောကျ ပှဲ ကို ၂၀ဝ၄ တှငျ ကငျြးပခဲ့ရာ ဆူဟာတို ထှကျခှာပွီး ၆ နှဈအကွာတှငျ ကငျြးပခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ အနိုငျရသူ မှာ အငွိမျးစားဗိုလျခြုပျကွီးတဈဦးဖွဈသော ဆူဆီလို ဗနျဘနျးယူဒိုယိုနိုဖွဈလာခဲ့သညျ။
ယူဒိုယိုနိုလကျထကျတှငျ အငျဒိုနီးရှားသညျ မွနျမာ ၏ ပွုပွငျပွောငျးလဲရေးအတှကျ အကွံပေးနဆေဲ ဖွဈ သညျ။ အငျဒိုနီးရှား၏ လမျးစဉျသဈမြားအကွောငျး ပွောပွပွီး ဒီမိုကရစေီ အကူးအပွောငျးအတှကျ တရား ဟောခဲ့သညျ့ အငျဒိုနီးရှားအစိုးရအဖှဲ့ဝငျမြား ယူဒိုယိုနို လကျထကျအထိ ရှိခဲ့ကွသညျ။
Laksmana က “ကြှနျတျောတို့က ကြှနျတျော တို့ သမိုငျးသငျခနျးစာတှကေို ပွောပွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တပျမတျောက လိုခငျြတာက တိုငျးပွညျကိုလညျး သူတို့ လကျထဲထားမယျ၊ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ ဒီမို ကရစေီကို ပွောငျးလဲနပွေီဆိုတဲ့ ပုံရိပျလညျး လိုခငျြတယျ” ပွောကွားသညျ။ တကယျတမျးကြ တပျမတျော မှာ ပွုပွငျပွောငျးလဲရေးစဈစဈကို လိုခငျြတဲ့ အုပျစုရယျ လို့ မရှိတာဗဟြု ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။
အငျဒိုနီးရှားစဈတပျမှ ကွယျသုံးပှငျ့ရ ဗိုလျခြုပျ ဝီဂြိုဂြိုကမူ အငျဒိုနီးရှား အတှအေ့ကွုံမှ ကောငျး ကောငျး အသုံးဝငျခဲ့ပွီးတော့ အခု မွနျမာနိုငျငံမှာ လိုနတေဲ့ အရာနှဈခုရှိပါတယျဟု ဆိုသညျ။ ပထမ တဈခုသညျ ငါးပါးသီလဟု ချေါသော ဆူကာနို ၁၉၄၅ တှငျ ခမြှတျခဲ့ သညျ့ နိုငျငံရေး သဘောတရားဖွဈသညျ။ ထိုအထဲမှ သီလတဈပါးမှာ ဒီမိုကရစေီကို ယုံကွညျခွငျး ဖွဈသညျ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျအငျဒိုနီးရှား၏ နိုငျငံရေး ငါးပါးသီလကဲ့သို့သော နိုငျငံတဈတနျးရှိ လူမြိုးစုံကို တဈသားတညျး ခညျြနှောငျထားနိုငျသညျ့ အတှေး အမွငျ အိုငျဒီယျောလျောဂြီမရှိခွငျးက အငျဒိုနီးရှားနှငျ့ ကှာခွားသညျဟုဆိုသညျ။ ဒုတိယတဈခုနှငျ့ မွနျမာ သညျ ကမ်ဘာနှငျ့ မကွာခဏ အဆကျပွတျသှားရပွီး အဆကျအဆံနညျးခွငျးကွောငျ့ပိုဆိုးသှားရသညျ့ နိုငျငံဖွဈသညျဟု ゞငျးကဆိုသညျ။ မလေးရှားကို လုံခွုံရေးကောငျစီ အဖှဲ့ဝငျအဖွဈ ရှေးကောကျသော ကွောငျ့ ဆူကာနိုသညျ ၁၉၆၅ တှငျ ကမ်ဘာ့ကုလသမဂ်ဂ ထဲမှာ အငျဒိုနီးရှားကို ထုတျပဈလိုကျသျောလညျး ၁၉၆၆ ဆူဟာတို တကျလာသောအခါ အဖှဲ့ဝငျပွနျဖွဈ လာခဲ့သညျ။ ထိုကာလမြားကတညျးက နိုငျငံပွငျပတှငျ ပညာသငျသှားခဲ့သော အငျဒိုနီးရှားမှ ကြောငျးသူ ကြောငျးသားမြား၊ စဈအရာရှိမြားရှိခဲ့ကွ သညျ။
ယခုရှငျးပွနသေော ဝီဂြိုဂြိုပငျလညျး အမရေိက နှငျ့ အခွားတိုငျးပွညျမြားတှငျ ပညာသငျရသော မြိုးဆကျမြားတှငျ ပါဝငျခဲ့သညျ။ အငျဒိုနီးရှားအမြား စုသညျ ပညာတျောသငျပွီးဆုံးလြှငျ အိမျပွနျလာခဲ့ကွပွီး ゞငျးတို့၏ တတျသိလိမ်မာမှုမြားနှငျ့ ကမ်ဘာကွညျ့ကွညျ့ မွငျနိုငျမှုမြားကို ယူဆောငျလာခဲ့ကွသညျ။ ထိုသို့ ပွညျပတှငျ အခွမေခဘြဲ နိုငျငံသို့ ပညာဖွငျ့ ပွနျလာ သူက အမြားစု ဖွဈသညျဟုဆိုသညျ။
“ခငျဗြားတိုငျးပွညျကို အခွားနရောတှနေဲ့ နှိုငျး ယှဉျကွညျ့စရာမလိုဘူးထငျရငျ ခငျဗြားတိုးတကျတော့ မှာ မဟုတျဘူး။ မွနျမာစဈတပျကတော့ သူတို့ကိုယျ သူတို့ပဲ အကောငျးဆုံးထငျတာ။ အဓိကကတော့ နိုငျငံ ကို ပိတျဆို့ထားခဲ့ကွတဲ့ အကြိုးဆကျတှပေဲ”ဟု ဝီဂြိုဂြို က ပွောကွားသညျ။
မွနျမာခေါငျးဆောငျမြားနှငျ့ ပွညျပနိုငျငံမြား ဆကျဆံရေးအပျေါမူတညျ၍ အခြို့နှဈမြားတှငျ မွနျမာ က စဈအရာရှိမြားကို အမရေိကသို့ ပညာသငျပို့ခဲ့ဖူး သညျ။ သို့ရာတှငျ ထိုပညာတျောသငျမြားသညျ အမေ ရိကနျအရာရှိမြားနှငျ့ ရောရောနှောနှော မနတေတျကွ ပေ။ အမရေိကနျတို့သညျ မွနျမာ၏ အကွောငျးမြားကို သိခငျြသောကွောငျ့ စကားနှိုကျလိုသော သူလြှိုမြား ဖွဈကွသညျဟူသော မှာကွားခကျြမြားကွောငျ့ မွနျမာ အရာရှိမြားမှာ ပေါငျးသငျးခွငျးမပွုကွပေ။ ထို့ပွငျ စဈတနျးလြားမြားတှငျ ဘီဘီစီနှငျ့ နိုငျငံခွားရဒေီယို ရုပျသံမြားကို နားထောငျခှငျ့မပေးဘဲ အစိုးရ ဝါဒဖွနျ့ခြိ ရေးယန်တရားမြားမှ ထုတျလှငျ့မှုမြားသာ ကွားရလေ့ ရှိ သညျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ ဖဖေျောဝါရီလ တဈရကျနေ့ နောကျပိုငျးတှငျ တပျမတျောကို အာဏာ ထိနျးခြုပျမှုကို မွနျမာပွညျသူတို့က ငွငျးပယျကွောငျး နညျးမြိုးစုံနှငျ့ ဆန်ဒပွနကွေသညျ။ အထူးသဖွငျ့ နညျးပညာကိုကြှမျး ကငျြသော လူငယျမြားသညျ တပျမတျောကို အယုံ အကွညျမရှိသလို သူတို့ကငျြးပပေးမညျ့ ရှေးကောကျ ပှဲမှာလညျး မြှတပွီး ဒီမိုကရစေီနညျးလမျးကမြညျဟု မထငျပေ။
“အရပျဘကျနဲ့ စဈဘကျကွားမှာ ယုံကွညျမှုကို မှနျမှနျကနျကနျမတညျဆောကျနိုငျဘဲနဲ့တော့ ဒီမိုက ရစေီကို ကူးပွောငျးနိုငျဖို့ဆိုတာမလှယျပါဘူး။ မွနျမာ ပွညျမှာ အခုဖွဈနတောကတော့ ယုံကွညျခကျြဆိုလို့ တဈပွားသားမှ မကနျြတော့တာပဲ” ဟု ဝီဂြိုဂြိုက ဆို သညျ။
(The Diplomat သတငျးဌာနမှ ဆောငျးပါးရှငျ ရဈခတျြဘောဆတျ (Richard Borsuk) ရေးသား သညျ့ With Recent Coup, Myanmar’s Military Diverges From the Indonesian Path ကို RISE News အယျဒီတာအဖှဲ့က ဘာသာပွနျသညျ။)